IELTS နှင် TOEFL စာမေးပွဲ များ၏ ရမှတ် (RESULT) နှိုင်းယှဉ်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » IELTS နှင် TOEFL စာမေးပွဲ များ၏ ရမှတ် (RESULT) နှိုင်းယှဉ်ချက်
IELTS နှင် TOEFL စာမေးပွဲ များ၏ ရမှတ် (RESULT) နှိုင်းယှဉ်ချက်
Posted by zaylay on Jun 14, 2010 in Other - Non Channelized |0comments
မြန်မာကျောင်းသားများ အကြားမှာ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပက်သက်ပြီး ရေပန်းအစားဆုံး အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ၂ ခုကတော TOEFL နှင် IELTS တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စာမေးပွဲတွေကို ဖြေဆိုသူ များလည်း တစ်နေ့ တစ်ခြား တိုးပွားလာပါတယ်။ ဖြေဆိုရတဲ့ အကြောင်းအရင်း များလည်း အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။
အဲဒါတွေနဲ့ အတူ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဒီစာမေးပွဲ ၂ ခုကို နှိုင်းယှဉ်မှုတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီထဲက ဒီစာမေးပွဲ ၂ခုရဲ့ ရမှတ် (result) နှိုင်းယှဉ်ချက် ကို ဗြိတိသျှကောင်စီ မှ IELTS စာမေးပွဲတာဝန်ခံ ဦးရောဘတ်တင်မြင့် မှအောက်ပါအတိုင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“တစ်ကယ်တော့ ဒီစာမေးပွဲ ၂ ခုရဲ့ မေးခွန်းပုံစံ၊ အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်း၊ စာမေးပွဲစစ်ပုံတွေဟာ လုံးဝခြားနားတဲ့အတွက် result ၂ ခုကို နှိုင်းယှဉ် ရန်အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော မီဒီယာများတွင်လည်း ဤစာမေးပွဲ result ၂ ခု နှိုင်းယှဉ်ချက်ကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ဖော်ပြထားတာကို လည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် မမှန်ကြပါဘူး။” ဟုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် Education Testing Service (ETS) မှ IELTS နှင် TOEFL စာမေးပွဲ ၂ခုစလုံး ဖြေဆိုခဲ့သူ ၁၁ဝဝ ကျော်ထံမှ အချက်အလက်စုဆောင်းသုတေသနပြုကာ အနီးဆုံး နှိုင်းယှဉ်မှု ကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ETS မှ TOEFL နှင့် IELTS စာမေးပွဲ ၂ ခုစလုံး ဖြေဆိုခဲ့သူ ၁၁ဝဝ ကျော်ရဲ့ စာမေးပွဲရလဒ်များကို အလျှင်စုဆောင်းပါတယ်။ ပြီးနောက် IELTS band score တစ်ခုချင်းအပေါ် ရာနှုန်းတွက်ချက်မှု (equipercentile approach) ကိုသုံးကာဤနှိုင်းယှဉ်မှုဇယားကို တွက်ချက်ပါတယ်။ ဤတွက်ချက်နည်းအရ IELTS band score တစ်ခုချင်းအပေါ် TOEFL ပျှမ်းမျှ ရမှတ်ကို ရရှိစေပါတယ်။
ဥပမာ – IELTS ၈.၅ ရမှတ်ဟာ TOEFL ဖြေဆိုသူအားလုံးအမှတ်ပေါင်းရဲ့ ၉ဝ ရာနှုန်းကို ကိုယ်စားပြု၍ အဆိုပါရာနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ TOEFL အမှတ် ၁၁၅ ရမှတ် (Internet-based) နဲ့ ညီမျှမှာပါ။ “ဒါပေမယ့် ETS ကနေပြီး ဒီဇယားကို သာမန်နှိုင်းယှဉ်ရုံသက်သက်သာ အသုံးပြုဖို့နဲ့ အဆုံးအဖြတ် ပြုရန်ကိစ္စများတွင် အသုံးမပြုဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်” ဟုဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
IELTS စာမေးပွဲ၏ အားသာချက်များ
IELTS စာမေးပွဲဟာ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲတွေထဲမှာ ယခုအခါမှာ ရေပန်းအစားဆုံး စာမေးပွဲဖြစ်လာပါပြီ။ IELTS ဟာ လစဉ်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ရမှတ် (Band Score) ကိုမကြိုက်ပါကလည်း ဖြေဆိုသူအနေနဲ့ အကြိမ်ရေ၊ကာလ အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်ခွင့် ရှိခြင်းကလည်း IELTS ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါ။
ယခင်က IELTS တစ်ခါဖြေပြီး ရလဒ်ကိုစိတ်တိုင်းမကျလို့ ပြန်ဖြေချင်ရင် ရက်ပေါင်း ၉ဝ (၃လ) စောင့်ပြီးမှပြန်ဖြေခွင့်ရှိတာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ၂ဝဝ၆ ကစပြီး အဲဒီစည်းမျဉ်းကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး ကာလ အကန့်အသက်မရှိ လုပ်ပေးထားကတည်းက ဖြေဆိုသူဦးရေလည်း လစဉ်တိုးပွားလာပါတယ်။ အခုဆိုရင်လစဉ်ဖြေဆိုသူဟာ ပျမ်းမျှ ၂ဝဝ မှ ၂၅ဝ အထိရှိလာပါတယ်။
IELTS ရဲ့နောက်ထပ် အားသာချက်ကတော့ အလွယ်တကူ ဖြေဆိုရန် စာရင်းပေး (Registration) လုပ်နိုင်ပြီး စာမေးပွဲကြေးကိုလည်း ၁ နှစ်အတွင်း ကျင်းပမဲ့ စာမေးပွဲရက်တွေကို ကြိုတင်ရွေးချယ်ပြီး မိမိဖြေဆိုသောလများ (စာမေးပွဲများ) အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲကြေးများကိုလည်း အခြားနိုင်ငံများရှိ Test Centre များထက် သက်သာသော နှုန်းထားကို ထိမ်းသိမ်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ စာမေးပွဲကြေးက ၁၄၅ ယူအက်စ်ဒေါ်လာပါ။ အဲဒီနှုန်းက ၂ဝဝ၇ ကတည်းက ကောက်ခံလာခဲ့တဲ့နှုန်းပါ။
စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်လို့ ၂ဝ၁ဝ ရဲ့ လက်ကျန် IELTS Test Date တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
IELTS စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် ဗြိတိသျှကောင်စီ မှ ပံ့ပိုးမှုများ
IELTS ဖြေဆိုသူများအတွက်လည်း လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လို့ရစေရန် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်မှာ IELTS စာအုပ်အမြောက်အများထားပေးထားပါတယ်။ ဗြိတိသျှကောင်စီ Self-access Centre မှာလည်း listening practice လုပ်လို့ရပါတယ်။
“ဗြိတိသျှကောင်စီ Self-access Centre မှ “IELTS CORNER” မှာ IELTS စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများ လေ့လာအသုံးပြုနိုင်ရန် နောက်ဆုံးထွက် IELTS စာအုပ် အမျိုးပေါင်း ၈၀ ကျော် (စာအုပ်ရေပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်) နှင့်အတူ audio CD နှင့်cassette ခွေများကို Starter Level မှ Band7to 8 Levels အထိ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် အမျိုးမျိုးခွဲခြား၍ ထားရှိပေးထားပါသည်။” ဟု Self-access Centre တာဝန်ခံ ဒေါ်ချောစုလင်း ကပြောပါတယ်။
“Listening လေ့ကျင့်ရုံသာမက IELTS နှင့်သက်ဆိုင်သော Reading, Writing, Grammar, Vocabulary စာအုပ်များကိုပါ သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးအစား အလိုက် ထားရှိပေးထားပါသည်။ မိမိ အားလပ်ချိန်တွင် အချိန်မရွေး ငှါးရမ်းအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက်လည်း IELTS စာအုပ် နှင့် CD များကို ထားရှိပေးထားပါတယ်။” ဟု ၎င်းမှ ဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်။
၎င်းအပြင် အသင်းဝင် (members) များနှင့် IELTS candidate များငှါးရမ်းဖတ်ရှုနိုင်ရန် စာကြည့်တိုက်တွင် IELTS Section ဟုသီးသန့်ထားရှိပေးထား၍ ၎င်း Section တွင် လည်း စာအုပ်ရေ ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် အလုံအလောက်ထားရှိပေးထားပါတယ်။ လစဉ် IELTS ဖြေဆိုကာနီး ကာလတွင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် IELTS နှင့်ပတ်သက်သော video show ကို Self-Access Centre တွင် ပုံမှန်ပြသပေးပါတယ်။
ထို့ အပြင် Teaching Centre မှာလည်း IELTS Preparation Course တွေလည်း ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ IELTS နှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ Self-access Centre နှင့် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ သိလိုသည်များရှိပါက British Council သို့ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဖုံး – ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈
အီးမေး – enquiries@mm.britishcouncil.org
ဤ Myanmar Network ပေါ်တွင်လည်း IELTS စာမေးပွဲအတွက် သီးသန့် forum category တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး မေးမြန်းသည်များကို British Council မှ တာဝန်ရှိသူများမှ အသေးစိပ်ပြန်ကြားပေးနေပါသည်။
Zar Lay has written 225 post in this Website..
I am simple girl. I like raining season.
View all posts by zaylay →